Atụmatụ Localzụ ahịa Obodo maka Oge Ezumike | Martech Zone
Anyị kwuru banyere Milo, inweta nke eBay. Ihe mgbaru ọsọ Milo bụ inwe ngwaahịa ọ bụla na shelf ọ bụla na akụkọ ọ bụla dị na weebụ. Ha na-ebugharịrị ụlọ ahịa mkpọsa n'oge ezumike a! E nwere ụfọdụ ndị dị ukwuu Atụmatụ ebe a na ohere maka mkpọsa outlets iji gbakwunye ha instore ahịa site na-akwọ ụgbọala okporo ụzọ ha ụlọ ahịa si online.
Dị ka oge ọ bụ oge iji kpoo mgbịrịgba Jingle na kuki gingerbread, wee bido ịre ahịa ụfọdụ!
Infographic site na Milo.